North iholide e Murmansk. Umlando North iholide
Winter ezemidlalo eRussia ayaphawuleka sibesibumbene. Umbhikisho amakhono anjalo ngokuvamile kukholelwa enyakatho yezwe, ngoba kukhona iningi ski iphelela. - Murmansk yiyona idolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni, etholakala ngale kwe-Arctic Circle. Kuyinto inhloko-dolobha izenzakalo ezinjalo. Kukhona 296 zemidlalo, kuhlanganise ezemidlalo izigodlo, ezinkundleni zemidlalo okubhukuda, ski resort, ski resort, nokunye. Minyaka yonke, kuthatha inqwaba yabadlali abavela ezweni lonke abahlangana ndawonye ukuze ubonise amathalente abo amaningi.
Yini igama izinkundla ebusika uNdunankulu wezwe? Nangendlela okuye kwathinta ezemidlalo ukuphila eRussia? Tshela wena kamuva kulesi sihloko.
Izimpawu celebration ezemidlalo
North iholide - lena umcimbi main kwezemidlalo ebusika, ebanjwa in kwentwasahlobo e Murmansk. Pho wena wakhetha lesi sikhathi?
Ngokuba ukulungiswa nemithambeka ski kudinga isikhathi esiningi, ikakhulukazi ngenkathi ezibandayo (Januwari-December) akunakwenzeka, kusukela iqhwa ethulula nsuku zonke futhi cishe njalo.
Futhi ephelele ukulungiselela yenhlangano senzeka ebusika, ukubhaliswa emncintiswaneni unikezwa izinyanga ezintathu futhi befuna uyithayiphe eziningi. Ayikho imikhawulo, wonke umuntu bazovunyelwa iqhaza, kuyokwenzeka ngokushesha njengoba inqubo yokubhalisa. Into eyinhloko ukuba abe impilo eqinile futhi isimo bejabule.
Umsuka walo mcimbi
Umkhosi wokuqala wabanjelwa ngo-March 30, North ngo-1934. Imininingwane yalolu ukugubha lolu suku yokuthi lo mncintiswano yahanjelwa skiers kuphela. Ngaleso sikhathi, abadlali Bezingekho, kodwa popularize leli holidi kuye kwasho ukuthi inani labantu zanda kakhulu.
Abahlela lomcimbi ngesikhathi okuvunyelwene ukuthi uhlelo ezemidlalo exutshwa lezempi. Ngakho-ke, ekunqobeni plan namanje kuhlanganisa imincintiswano olwengeziwe mayelana nokudubula.
Ngisho impi asithinti isiko Russian. North idili waqhubeka efanako, abadlali abangu ngakho unqobe ngomdlandla, ukuthi kwathunyelwa mncintiswano kwesokudla kusukela front.
Ngemva Kwempi ukuphila ezemidlalo asebenzayo
Ngemva kokuphela imisebenzi ezimbi amaNazi ku eSoviet Union, iholide kukora isivinini esiphindwe kabili. Abahleli ziye zasungula umqondo omusha bazokwazi ukuheha ababukeli abasha ngaphezulu, njengoba kokusa kwezemidlalo imincintiswano yobudala ababambi qhaza baqalisa engamashumi amathathu.
Ngo-1961, uhlelo olwengeziwe lwaqala, okuyinto kuye kwavula amathuba amasha abafundi. Abahleli anakekela zokwethembeka wadala wodwana iqhaza, okuyinto wahlukaniswa abadala abadlali professional. Kwaba iqembu junior, okwakuthatha ukuqeqeshwa okukhethekile phambi imincintiswano ngokwabo.
1962 kwaphawulwa yokuthi uhlu izenzakalo ingezwe ice hockey. Ngesikhathi North Festival wayevele isimiso esiphelele esibanzi, okungase kuhlanganise abameleli yimuphi umdlalo ebusika.
A level entsha
1971 kwakungekho zincane ngoba lo mkhosi. North iholidi (isithombe inqubo yokuncintisana ayatholakala esihlokweni) wafika ezingeni emhlabeni, futhi babuthana izenzakalo abameleli abaningi bezinye izizwe yezemidlalo ubusika. Kwakumelwe ababambiqhaza eBulgaria, eHungary, e-United States, Korea nokunye.
Futhi lowo mnyaka, imincintiswano lokuqala parachutists elahlanganiswa hlelo, futhi eduze 1974 mu waqala ukuba imincintiswano ku Biathlon aphethwe.
Kusukela ngo-1984, imikhosi of the North uqale emcimbini wokuvula, lowo mcabango lathathwa Imidlalo yama-Olympic. Ngosuku lokuqala kukhona izibani samaholide komlilo, bese uthwala kuyo yomphakathi ephakathi nalesi siqhingi zaleli dolobha.
Njalo eyishumi kuletha ushintsho yayo kule migubho. Uma sicabanga ekuqaleni kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili-ke le nkathi iqale BUSA emidlalweni eyingozi: rock ekhuphuka, ikhayithi surfing futhi windsurfing. Kamuva wanezela nezinhlobonhlobo engavamile: football on iqhwa, umncintiswano abadobi okhuthele phezu izinduku zakidyvaniem.
Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke kubantu ngonyaka ngeke anikele ezintsha bese wengeza ukwehluka emkhosini laseNyakatho. Murmansk njalo ithola izivakashi abeza iqhaza kwezemidlalo imincintiswano. Ukuze induduzo yanda, umcimbi washukumiseleka ngalé umuzi ngokwawo, esigodini ihlathi wenduduzo. Kuyinto yezemidlalo ezinamandla, lapho zonke izimo ngoba emidlalweni.
Nokho abagqugquzeli ungayeki ngesikhathi esisodwa endaweni eyodwa endaweni bese uzama ukuthola izindlela ezintsha kuze kube iholidi ngaphambi okukhulu.
Esinye sezici ezivelele lokhu ezemidlalo senzakalo esiphawulekayo kuyinto webanga, elihlanganisa ezifundazweni eziningana. Igama liyazikhulumela - "Ski Track zobungane." Imincintiswano zaloluhlobo empeleni esasisesisha, kusukela ngo-1994.
Lokhu ski izinhlanga, okwenzeka ensimini ka emazweni amaningana - Russia, Norway futhi Finland. Okubaluleke kakhulu, isidingo iqhaza hhayi lokudlela nge imibhalo. Ngisho noma wena ungowesinye isizwe, ungathatha ingxenye ngaphandle ipasipoti ngaphandle kwezinkinga.
Vula Isizini 2015!
Kulo nyaka kwaba khona ukuphendukela imikhosi yezemidlalo, njengoba kwenzeka ngo-edolobhaneni Okuningi uki. North iholide nodumo yaphumelela, namakheli iqhaza kwaba zingaphezu kokwaneleyo. Naphezu kweqiniso lokuthi okubanjelwe ishintshile, ngesasasa asikapheli, futhi wonke umuntu ngokulangazela nengxenye imincintiswano ehlukahlukene.
Futhi aphethwe eziningi cindezela izingqungquthela lapho abagqugquzeli wayiphendula yonke imibuzo.
Abahlanganyeli ababeshumayela zonke izindawo ezemidlalo, kanye amafomu non-bendabuko, okuyinto eye yachazwa ngaphambili.
Minyaka yonke, lo mncintiswano kwenza umlando yomncintiswano luvula amathuba amasha abahlanganyeli. Kwaphela iminyaka eminingi kangaka, umcimbi kwaba eningi izenzakalo ezithakazelisayo, imininingwane yayo eqoqwe archive. Thina ukuniqaphelisa amanye amaqiniso athakazelisayo:
North umhlaziyi ovelele Vadim Sinyavsky holidi lenziwa - intatheli owaziwa, umsakazi, umsunguli we-Soviet emidlalweni yesikole lokuqala amazwana.
Ngo-2009, lo mcimbi kwahlanganiswa uhlu abawinile of the "Wonders Seven onqenqemeni wezwe" imiphumela okuthandwayo.
Futhi umcimbi wezemidlalo zazingahambi ukuhlonipha izingqwele amaningi. Phakathi kwabantu wema Sergey Dolidovich, Belarus omele (onqobayo eziyisikhombisa), ababa nakho abesifazane - Julia Chepalova basuka eKhabarovsk (onqobayo ezintathu).
Siyabonga kulo mcimbi, Russia kujoyina elikhulu ezemidlalo ebusika: Euroloppet, Russialoppet futhi marathons "Ski Russia" Union.
Vula ithalente abasha ongakuholela isiqongo seNtaba i-Olympus, lokhu kuzosiza atewugubha laseNyakatho. Ukushushuluza unqamule izwe ngokukhethekile embule ezingaba yezemidlalo futhi ubonise kanjani okusheshayo ungakwazi ukushaya abancintisana naye.
Naphezu kweqiniso lokuthi lo mncintiswano uvuleleke ochwepheshe, cishe, uyoba benqoba zonke izithiyo bese uthole umklomelo omkhulu.
I itiye emcimbini China. Ubuciko itiye emcimbini
Faux Pas - Iyini?
Benjamin: igama, incazelo, imvelaphi
Subculture "kubaduni": izici kanye nomlando
Cat Yoshkin: Manje lethusi
Zokubhukuda kazwelonke Belarusian (isithombe). Belarusian imvunulo yesizwe ngezandla zabo
Multifollikulyarnye amaqanda - lokhu akukona uphethwe
Isikhonyane (isikhonyane) - kuyini? incazelo izinambuzane
Ngingaba uhlanganise amafutha abakhiqizi ezahlukene? Izimpawu motor amafutha
"Umholi we Tower", yokudlela "Floor 41"
Mackerel eyayigcwele. Indlela ukupheka lula futhi okumnandi
Phawula kubazali: indlela ukunqanda nabantwana bememeza